रोचक तथ्य: पुरुषमा युवतीले यी कुराहरु खोज्छन् !
साउन ३१, २०७७ | 15th August, 2020
28400 पटक पढिएको
एजेन्सी, पुरुषमा महिलाले केहि कुराहरु खोज्छन् । कुनै पनि सम्बन्धको शुरुवात बाहिरी सुन्दरताबाट हेरिन्छ तर सम्बन्ध लम्बिँदै जाँदा मानिसको स्वभाव हेरिन्छ । खासमा सम्बन्धको आयु सुन्दरताले होइन स्वभावले निर्धारण गर्छ । एक महिलाले पुरुषबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने भनेको राम्रो स्वभाव हो ।
लामो सम्बन्धमा महिलालाई सुन्दरताले भन्दा पुरुषको स्वभावले आकर्षित गर्छ । दीर्घ सम्बन्धमा स्वभाव प्रधान हुन्छ तर आफ्नो पुरुषको आकर्षक लुक र ब्यक्तित्व पनि महिलाको चहाना हो । पुरुषको स्किन कलरले समेत महिलालाई प्रभाव पार्ने कुरा भएको बताइन्छ । राम्रो लुक र पहिरनपछि महिलालाई चाहिन्छ हँसिलो अनुहार । कुनै पनि पुरुष हँसिलो अनुहारसहित प्रस्तुत हुन्छ भने उप्रति महिला आकर्षित हुन्छे ।
यदि महिललाई हसाउँने क्षमता छ भने तपाइँ पनि सफल पुरुष हो किनभने महिलाहरुले आफूसँग संगत भएको पुरुषमा सेन्स अफ ह्युमर चाहन्छन् । यस्ता पुरुषले महिलामा प्रभाव छोड्न सक्छन् । शरीरको बनौट पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि पुरुषको शारीरक बनौटसँग महिलाको चासो हुन्छ । एक रिपोर्टका अनुसार महिला अधिकाँश महिलालाई अत्याधिक अग्ला वा होंचा भन्दा औषत उचाइ भएका पुरुक्ष मन पर्छन् ।
यी ५ कारणले महिला यौन सम्पर्कमा सन्तुष्ट हुँदैनन्
पोर्न वेबसाइट बनाई अश्लिल भिडिओ अपलोड गर्ने १ जना काठमाडौँवाट पक्राउ
यस्ता छन् हस्तमैथुन गर्दाको फाइदाहरु !
भारतीय क्रिकेटर धोनीले लिए अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्वर १४ सिल गरियो
काठमाडौं उपत्यकामा आज ९८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नेपालमा संक्रमितको संख्या २६ हजार नाघ्यो, आज थपिए कोरोनाका नयाँ ४६८ संक्रमित
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप ३ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या १०२ पुग्यो
नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या १७२०१ पुग्यो, थप १२४ जना घर फर्किए
कपिलवस्तुका थप १ जना कोरोना संक्रमितको रुपन्देहीमा मृत्यु